STUDIO 2 IZIVAKASHI-AMAPHEZULU KAMINA - I-Airbnb
STUDIO 2 IZIVAKASHI-AMAPHEZULU KAMINA
Divarata, Kefalonia, Peloponnisos Dytiki Ellada ke Ionio, i-Greece
Amafulethi kaMina atholakala maphakathi nesiqhingi.
Ibhishi eliseduze, iMyrtos, liqhele ngamakhilomitha ayi-1,5 ukusuka kithi.
Amafulethi kaMina akhiwe endaweni embozwe izitshalo nezihlahla e-Divarata evela emndenini kaMnu Sotiris Pavouris.
Umbono ka-Grandfather Sotiris bekuwukudala umsingathi wesitshalo somshayeli omncane lapho izivakashi zase-Kefalonia zingazola, ziphumule futhi zijabulele indawo enhle.
Namuhla, ibhizinisi lomndeni lithathe uNkk Markela, indodakazi yomndeni kanye nezingane zakhe uMina noSotiris beqhubeka nesiko labazali bakhe.
Amafulethi kaMina anezitudiyo eziyi-10 namafulethi ama-4.
Ama-studio angu-8, ama-attics angu-2 namafulethi angu-4 anamagumbi amabili. Zonke izitudiyo zinekhishi elihlome ngokuphelele, igumbi lokugezela, i-TV, isimo somoya, okomisa izinwele kanye ne-balcony. Ama-attics anefriji kuphela, i-kitchenware, i-air conditioning, igumbi lokugezela kanye ne-balcony enombono omuhle. Amafulethi ama-4 anamakamelo okulala amabili, ikhishi elihlome ngokuphelele, amagumbi okugeza angu-2, i-TV, isimo somoya, isomisi sezinwele kanye ne-balcony.
Umbono ka-Grandfather Sotiris bekuwukudala umsingathi wesitshalo somshayeli omn…
ubusuku obungu-7 e- Divarata
4.83 (izibuyekezo ezingu-35)
I-Mina's Apartments etholakala egqumeni elihle. Banombono omuhle we-Divarata futhi banikeza izikhathi zokuphumula, izihambi kanye nezindawo ezinhle zezwe.
I-Kefalonia igcwele ubuhle bemvelo, amakha, isiko nomlando.
Ezindlini zikaMina sifuna ukwabelana nawe ngomlingo nezimfihlo zesiqhingi sethu futhi okubaluleke kakhulu ukuqinisekisa ukuthi uhlala uphumule futhi wamukelekile.
Kwaziwa kahle ngombala oyingqayizivele wamanzi alo aluhlaza acwebile adalwa ukugqama kwetshe elimhlophe lolwandle kanye nohlaza olumnyama lwale ndawo ngokuqinisekile luyindawo okufanele ibonwe noma isiphi isivakashi saseKefalonia. Ku-Divarata ebangeni elingu-150m. kukhona amathaveni - izindawo zokudlela, izitolo ezinkulu, isitolo esinemikhiqizo yesintu, ibhusha kanye nesitolo esinokudla kwasolwandle nezinto eziyisikhumbuzo. Futhi endaweni efanayo namakamelo kukhona i-cafe-snack-bar yethu "NUOVO CAFE".